पार्टीलाई सही नीति, विधि र पद्धतिमा अघि बढाउनुको विकल्प छैनः झलनाथ खनाल
२०७८ श्रावण ७ गते १३:३१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई सही नीति, विधि र पद्धतिमा अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्
भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचारत पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको ४३ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले पार्टीलाई थप एकताबद्ध गरि सुदृढ र थप मजबुत बनाउदै समाजवादको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुनै पुष्पलालप्रतिको सच्चा सम्मान हुने बताएका छन्।
‘क.पुष्पलाल कै मार्गदर्शनबाट अघि बढेर आज हामीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौं, देशको संविधान निर्माण गरेका छौं । यी सबै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले ७२ बर्ष पार गर्ने क्रममा हामिले प्राप्त गरेका असाधारण उपलव्धीहरु हुन् । यी उपलब्धीहरु सगँसगै हाम्रा सामु ठुलठुला चुनौतिहरु पनि खडा भएका छन् ।’, खनालले भनेका छन् ।
खनालले लेखेका छन्
आज २०७८ साउन ०७ गते, ४३ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल प्रति उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु । साथै, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यो उचाइमा ल्याईपुर्याउन जीवन आहुति गर्ने सम्पूर्ण महान् सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु।
कुनै पनि समाज वा राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व र विकासको प्रक्रियामा नयाँ व्यक्तित्व र विभूतिहरुलाई जन्माउने गर्छ । उनीहरुको मार्गदर्शन र अगुवाईमा सिंगो समाज वा राष्ट्र प्रभावित हुने गर्छ र आफ्नो विकास क्रममा नयाँ दिशा, चरण र श्रृंखलाहरु प्राप्त गर्ने गर्छ । यही ऐतिहासिक प्राकृतिक विकास प्रक्रियाको रुपमा नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलनका जन्मदाता, प्रणेता साथै संवाहक कमरेड पुष्पलाल हुनुहुन्छ । क. पुष्पलाल कै मार्गदर्शनबाट अघि बढेर आज हामीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौं, देशको संविधान निर्माण गरेका छौं । यी सबै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले ७२ बर्ष पार गर्ने क्रममा हामिले प्राप्त गरेका असाधारण उपलव्धीहरु हुन् ।
यी उपलब्धीहरु सगँसगै हाम्रा सामु ठुलठुला चुनौतिहरु पनि खडा भएका छन् । यी चुनौतिहरुसँग जुध्न हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई सही नीति, विधि र पद्धतिमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन । साथै पार्टीलाई थप एकताबद्ध गरि सुदृढ र थप मजबुत बनाउदै समाजवादको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुनै क. पुष्पलाल प्रतिको सच्चा सम्मान पनि हो । धन्यवाद !
०७ साउन, २०७८
वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले
एमाले देशको मुख फेर्ने परिपक्क पार्टी होः ओली
केही व्यक्तिले प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर पार्टी फुटाउन लागेः ओली